Tirada lagu tuhunsan yahay dembiyo dagaal oo kor u kacday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tirada lagu tuhunsan yahay dembiyo dagaal oo kor u kacday
La cusbooneeyay tisdag 10 januari kl 12.36
La daabacay tisdag 10 januari kl 09.56
Debiyada dagaallada lagu galo.
Buugga xeerka Sweden iyo waraaqo is dul saaran. sawir: Sawirle: Bertil Ericson / TT
Sannadkii ina dhaafay ee 2016 ayey markii ugu horreeysay ay soo gaartay guddiga dembiyada dagaalka tiradii ugu badnayd ee dacwooyin arrimmahaa la xiriira. Guud ahaan waxaa dacwad laga soo oogey 63.
Arrintan ayaa la sheegeyaa inay ugu wacan tahay qaxootiga faraha badan ee dalka soo galey, kuwaasina oo ka soo qaxay dagaalka sokeeye ee ka aloosan dalka Suuriya. Halka ay guddiga dhanka kale u muuqatay iney is badaleen qaabkii baarista dembiyada noocaasi ah.
– Tirada dacwooyinka laga soo oogo falal-dembiyeedyada noocaasi ah ayaa kor u kacay wixii ka dambeeyay fara-badnidii qaxootiga dalka harqiyey sannadkii 2015. Muddadaasina oo sidoo kale ey kor u kaceen tirada dacwooyinka naga soo gaara bulshada, iyo sidoo kale hayadda socdaalka, maadaama ey gacanta ku hayeen faylal fara badan isla-markaasina war-bixinnada soo gaarayey ey aad u bateen., sida ay sheegtay Patricia Rakic Arle, ahna madax-laameed guddiga ka hor-tagga falalka dembiyada dagaalka ee hayad-qarameedka magaceeda loo soo gaabiyo NOA.
Sannadkii ina dhaafay 2016 ayey guddiga soo gaareen dacwooyin gaarsii-san 63 lagu tuhun-san yahay fal-dambiyeedyo dagaal. Waana tiradii ugu badneyd wixii ka dambeeyay aasaaskii guddiga ee sannadkii 2008. Sannadkii 2015 ayey dacwooyinka noocaasi ahi gaarsiisnaayeen 40.
Dawladda Sweden ayaa horay qalinka ugu duugtay heshiisyo caalami ah oo dhigeya in daba-gal iyo baaris lagu sameeyo falalka dembiyada dagaallada – waxa lagu magacaabo xasuuqa bulshada iyo sidoo kale dembiyada laga galo xuquuqda bani’aadamka.
Marka laga yimaado dacwooyinka ka soo gaara guddiga bulshada iyo hayadda socdaalka ayey sidoo kale war-binno ey guddiga ka soo gaaraan hayadaha waddammo ka bax-san dalka Sweden, halka uu sidoo kale guddigu dhankiisa baaritaanno arrimmahaa la xiriira kasameeyaan aaladda internet-ka.
Dembiyada dacwadda laga soo oogey sannadkii 2016 ayaa inta badan lagu soo eedeeyey inta badan suuriyaan, sida ay sheegtay Patricia Rakic Arle. Sidoo kale wuxuu is-bedel ku dhacay habkii baarista ee dembiyada dagaallada maadaama wixii intaa ka horreeyay dacwooyinka laga soo oogi jirey dembiyo waayo hore ka dhacay waddammada Yugoslaaviya ama Ruwaanda.
– Dembiyadaa hore dhammaantood ayaa markii ey maxkamad gaaraanba uu markhaatigu ahaan jiray cid u soo taagnayd ama ka soo badbaaday falal-dembiyeedyadaa oo af-ka un ah laguna casumey maxkammadaha Sweden, sida ay sheegtay Patricia Rakic Arle iyadoona hadalkeedii sii raacisay:
– Iminka waxaannu isku daynaa sidii aannu markhaati-fur uga heli laheyn aaladda internet-ka, aaladaha ey bulshadu ku kulanto, iyada oo qaarkood dadyoowga dembiyada galaa ey qudhoodu aaladda internet-ka soo dhigaan sawirro iyo aflaan ey ka qaadeen kolka ey falal dembiyada galayeen.
Iminkadan la joogo ayaa guddiga falal-dembiyeedyada dagaallada waxaa u gacanta ku hayaa 23 dacwadood. Waana dacwooyin lagu soo oogey shakhsiyaad ka kala yimid tusaale ahaan waddammo kala duwan oo ey ka mid yihiin Suuriya, Suudaan iyo Ruwaanda.
Dacwooyinka qaarkood ayaa miiska saarnaa muddo sanooyin ah. Middaasina oo macnaheedu tahay in dacwooyinka sannadkii hor na soo gaarey aan qaarkood baaris lagu heyn. Middaasina ugu wacan tahay dhowr sababood, sida ay sheegtay Patricia Rakic Arle.
– Waxaa ugu wacnaan kara in war-bixinta aannu ka helnay hayadda socdaalka la xiriirto oo keliya ereyada qofkii la wareeystay, hase yeeshee aanay jirin cid kale oo laga wareeysto ama markhaati kale ee caddeeyn kara fal-dembiyeedka. Sidaa ayaannu hoos ugu dhignaa dacwadda.
Guddiga dembiyada dagaalka ayey horay uga shaqeeyn jireen siddeed baareyaal, hase yeeshee sannadkii ina dhaafay lagu kor-dhiyey lix hor leh. Sidoo kale waxaa la adkeeyey howlaha baarista ee la xiriira dembiyada dagaallada. Waan mid loo baahnaa, sida ay sheegtay Patricia Rakic Arle, aamin-sanna in aaney dacwooyinkaasi hoos u dhici doonin.
– Sannadkan 2017 ayaan maleeyneynaa in dacwooyinku gaarsiisnaan doonaan tiro u dhiganta middii 2016.